Manafatra Airbus A25neos 321 fanampiny ny Delta Air Lines
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » USA Travel News » Manafatra Airbus A25neos 321 fanampiny ny Delta Air Lines
Ity kaomandy farany avy amin'ny Delta Air Lines ity dia mitondra ny baiko manontolo an'ny A321neo hatramin'ny nanolorana azy ho 3,500
Ny baiko vaovao dia ankoatry ny kaomandin'ny Delta 2017 an'ny fiaramanidina 100 A321neo
Ireo fiaramanidina ireo dia hampandehanin'ny motera Pratt & Whitney PW1100G-JM
Delta koa dia nanafaingana ny fandefasana fiaramanidina A350-900 roa ary koa fiaramanidina A330-900neo roa
Ny Delta Air Lines dia nametraka baiko hentitra mandritra ny 25 Airbus Fiaramanidina A321neo (New Engine Option). Izany dia ankoatry ny kaomandin'ny Delta 2017 an'ny fiaramanidina 100 A321neo. Ireo fiaramanidina ireo dia hampandehanin'ny motera Pratt & Whitney PW1100G-JM. Ho fanampin'izany, Delta dia nanafaingana ny fandefasana fiaramanidina A350-900 roa ary koa fiaramanidina A330-900neo roa.
"Miaraka amin'ny mpanjifanay vonona hamerina ny hafaliana amin'ny dia, ity fifanarahana ity dia mametraka ny Delta hitombo raha toa ka mitaky ny fisotroan-dronono fiaramanidina tery tranainy kokoa amin'ny fiaramanidina misy antsika, mampihena ny dian-tongotrantsika, mampitombo ny fahombiazany ary mampisondrotra ny traikefan'ny mpanjifa," hoy i Mahendra Nair, Delta Air-dalana,'Filoha lefitra zokiolona - paikady fiaramanidina. "Misaotra ny Airbus izahay tamin'ny fiaraha-miombon'antoka mafy nandritra ny areti-mandringana ary manantena ny fiaraha-miasa amin'izy ireo rehefa manefa ny A321neo ary koa ny fitaterana A350 sy A330-900neo haingana."
"Izahay dia nitantana ny fanamby tamin'ny taon-dasa niaraka tamin'ny mpanjifanay, ary mahafaly anay ny mandray fepetra toa izao mankany amin'ny fitomboan'ny indostria miaraka amin'ny mpiara-miasa amintsika efa ela, Delta," hoy i Christian Scherer, Lehiben'ny tompon'andraikitra ao amin'ny Airbus.
Amin'ny ankapobeny, ny fiaramanidina A320neo Family dia manolotra fanatsarana solika isaky ny seza 20%, miaraka amin'ny elanelam-potoana fanampiny hatramin'ny 500 kilometatra an-dranomasina na roa metric taonina ny karama fanampiny.
Natolotra voalohany tamin'ny volana aprily 2017, ny A321neo dia mizara iraisan'ny airframe 95% miaraka amin'ny Family Airbus A320, izay manamora ny fampidirana tsy misy fangarony an'ireo andian-tsambo iray. Ny A321neo koa dia mizara isa isa mahazatra amin'ny sisa amin'ny A320 Family, mamela ny mpanamory fiaramanidina A320 Family hanidina ny A321neo tsy misy fiofanana fanampiny.
Ity kaomandy farany avy any amin'ny Delta Air Lines ity dia mitondra ny baiko feno an'ny A321neo hatramin'ny nanolorana azy ho efa ho 3,500, miaraka amin'ny fiaramanidina maherin'ny 500 efa amina fiaramanidina manerantany.